Microsoft inogona kunge ichironga kuvhura Surface Laptop 4 muna Kubvumbi 2021 ine Surface edition AMD processor uye Intel Tiger Lake-U, maererano nematanho ematanho matsva. Microsoft yakatangisa yekutanga AMD-inofambiswa neSurface Laptop mu2020 uye inouya netsika yeRenzen 7 CPU ine Radeon RX Vega 11 mifananidzo. Panguva iyoyo, mishumo yakaratidza kuti Microsoft iri kushanda ne AMD… [Verenga zvakawanda ...] nezve Surface Laptop 4 inoonekwa pamhepo neIntel Tiger Lake-U uye AMD CPUs
Microsoft To-Do ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa kuita-kuita zvinyorwa zveApple uye mamwe mapuratifomu. Mumwe anogona kuishandisa kugadzira zvekuita-zvinyorwa, kugadzira zviyeuchidzo, kutora zvinyorwa, nezvimwewo. Pamusoro pezvo, zvakare inorongedza zvimwe zvinobatsira zvakavanzwa kusimudzira kugadzirwa kwako. Heano makuru gumi eMicrosoft To-Do matipi uye matipi eIOS aunogona kushandisa pane yako iPhone. Microsoft To-Do Matipi uye Matipi eIOS (iPhone /… [Verenga zvakawanda ...] nezve Top 10 Microsoft To-Do Matipi uye Matipi eIOS
Microsoft inoburitsa Edge Dev chiteshi kuvaka 90.0.796.0 ine yakagadziridzwa mafaro, nhoroondo yekutsvaga uye nezvimwe
Microsoft nhasi inosunungura kuvaka 90.0.796.0 kune Dev chiteshi. Iyo yekuvandudza inounza akati wandei tebhu-manejimendi-zvine hukama maficha anga achibuda muCanary vhezheni ichangopfuura. Yakawedzera maficha: Wakawedzera kugona kutanga kutaipa kuti utsvage nekukurumidza kana ivo vanofarira uye enhoroondo mamenu akavhurwa uye akatakurwa. Wakawedzera mazano kubva kunhoroondo yekubhurawuza ... [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft inoburitsa Edge Dev chiteshi kuvaka 90.0.796.0 ine yakagadziridzwa mafaro, nhoroondo yekutsvaga uye nezvimwe
Imwe yemabhenefiti emaTimu ndeyekuti chikuva chinopa mhinduro yakasimba yekubata mafoni emisangano uye kubatana. Asi mukati megore rapfuura, iko kunyorera kwave kungove wechipiri-kirasi mugari kune imwe, asi inozivikanwa mamiriro, misangano yekuzvimirira. Ndiine Matimu nhasi, kana iwe uchida kuronga musangano, iwe enda kune iyo pakarenda tab, tinya 'Musangano Mutsva',… [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft Inowedzera 'Sangana Izvozvi' kune Matimu asi Zvinoda Kuenda Nhanho Imwe Kuwedzera
Microsoft iri kuyedza matsva desktop desktop akaiswa neEdge browser. Vamwe vashandisi veEdge parizvino vanokwanisa kuwana nhau uye yemamiriro ekunze widget, iyo, zvakanyanya senge nyowani yebasa rebasa renhau, kununura mamiriro ekunze uye nhau kuburikidza neMicrosoft Bing sevhisi. Iyo ficha inogoneswa nekudzvanya pane inogara iri-pamusoro-inoyerera icon uye inowanikwa kunyangwe kana Edge yakavharwa. Icho chimiro chiri… [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft iri kuyedza Edge desktop widgets